About Us - Allena BNP Technology Co., Ltd.
In 1978, Shiinaha fuliyo siyaasadda dib u habaynta iyo furitaanka-up ee. Si kastaba ha ahaatee xitaa by 1990, codsiga of Allena lama aqoonsan yahay in Shiinaha tan iyo waxaa jiray la'aan ah waxbarashada in industry ee. Ogaaday in, our u kaliyeeli Diinta iyo cilmi baarista ayaa marna la joojin. First aasaasay sanadkii 1998, BNP technology Allena Co., Ltd. waa shirkad technology-bidaya oo ka go'an in ay redearching, naqshadaynta, wax soo saarka iyo suuq-geynta ee qalabka jiilka Allena iyo qaybaha la xiriira.
Waxaan dadaal kasta si loo baro macaamiisheena, bixiyaan xal of Allena mashaariicda ay. Sano oo shaqo adag ayaa bixiyay, codsi Allena la aqbalo fileds kala duwan iyo matoorrada Allena our ayaa sidoo kale loo aqoonsaday waxyaabaha aadka la isku halayn karo leh qaab aad u fiican in Shiinaha. Tobaneeyo sano, waxaynu ku siineysey matoorrada Allena macaamiisha badan oo si fiican u yaqaan, tusaale ahaan, Coca-Cola, Ting Hisin International, Danone, Desjoyaux, adeegaya 60% ka mid ah codsiga Allena ganacsi ee suuqa guryaha.
Sida Shiinaha noqday "warshad dunida", waxyaabaha aannu si tartiib ah u noqday kuwa loo yaqaan macaamiisha adduunka oo idil. Oo iyana waxay ku waxaa loo iibiyey in qaarada kala duwan dunida dacaladeeda. Si aad alaabta Allena BNP iyo aad u badan la heli karo in dunida oo dhan ka dhigi, waxaan bilaabay qeybinta Allena BNP caalamiga ah ee 2014, oo ay ku jiraan suuq geynta, iibinta iyo adeegga macaamiisha.
In 20-sano ee soo socota, waxaan sii wadi doonaan in ay qaataan howlgalka lagu hayo in xawaaraha la technology ugu dambeeyay, siinta waxyaabaha la isku halayn karo, samaynta cilmi-baaris ah ee codsiga Allena iyo kordhinta BNP kala duwan oo soo saarka Allena codsiyada ka badan ballaaran.